Daniel Pantaleo: Askarigii Maraykanka ahaa ee ceejada ku dilay nin leh ma neefsan karo oo tallaabo laga qaaday - BBC News Somali
Daniel Pantaleo: Askarigii Maraykanka ahaa ee ceejada ku dilay nin leh ma neefsan karo oo tallaabo laga qaaday
Lahaanshaha sawirka NY Daily News
Image caption Eric Garner oo la sawiran xaaskiisa Eswa
Askarigii ka tirsanaa booliiska magaalada New York ee ceejada ku dilay ninka Madaw ee Maraykanka ah sannadkii 2014 ayaa shaqada laga tiray.
Daniel Pantaleo ayaa loo eryay dilkii Eric Garner oo intii aysan naftu ka bixin ku cataabay "ma neefsan karo" arrintaas ayaana horseeday mudaaharaadyo looga cabanayo awoodaa xad dhaafka ah ee ay booliisku adeegsadaan.
Xeerbeegti ku sugan New York ayaa diiday in fal dambiyeed lagu soo oogo askariga.
Baaritaan dheer ayaa la sameeyay, dacwad oogeyaal faderaalka ka tirsan ayaana bishii hore sheegay in aysan wax dacwad ah ku soo oogi doonin.
Ciroolayaal isku calmaday magaalada Mandera
Go'aankan shaqada looga tiray ayaase salka ku haya talo ka timid xaakim ka tirsan waaxda anshaxa ee booliiska, waxaana Isniintii ku dhawaaqay taliyaha booliiska magaalada New York James O'Neill.
Daniel Pantaleo ayaa shaqada laga joojiyay intii uu sugayay go'aanka laga gaarayo mustaqbalkiisa.
O'Neill oo sharaxaad ka bixinaya go'aanka ayaa sheegay in muuqaal lagu duubay taleefanka uu si cad u muujinayo in askarigu uu adeegsaday daro, arrintaasna ay tahay mid mamnuuc ka ah booliiska New York.
"Way caddahay oo Daniel Pantaleo hadda uma shaqayn karo booliiska New York City," ayuu yiri O'Neill
"Haddii aan ahaan lahaa askari ku jira xaaladda Daniel oo kale , waxay u badan tahay in inaan khaladkaas oo kale samayn lahaa," ayuu intaas ku sii daray.
"Midkeenna kama laaban karo go'aannada," ayuu yiri wuxuuna intaas ku daray: "Khaasatan marka go'aannadaasi ay galaaftaan nolosha qof banii'adam ah oo kale."
Qareenka Daniel Pantaleo ayaa sheegay in uu racfaan ka qaadan doono go'aanka lagu eryay.
Maxaa ku dhacay Eric Garner?
Garner ayaa la xiray isaga oo looga shakisan yahay in uu si sharci darro ah u gadayay sigaar tafaariiq ah taariikhdu markay ahayd 17 bishii Luulyo ee sannadkii 2014.
Muuqaal uu duubay qof goobtaas taagnnaa, ayaa muujiyay Pantaleo oo caddaan ah oo daro qoorta kaga haya Garner.
Qareenka askariga ayaa sheegay in macmiilkiisu uu isticmaalay xeeladdii la ogolaa in la adeegsado marka dadka la xirayo, balse taliye ku xigeenka qaybta maxkamadaynta Rosemarie Maldonado ayaa bishan horraanteedii caddeeyay in Pantaleo uu adeegsaday daro, arrintaasina ay mamnuuc ka tahay booliiska New York.